bacaha warqad warshad ee Shiinaha Beyin xirxirida
Bacda suugada kartida leh
Bac cawska cat kartoo ca ca ...
Sidee loo isticmaalaa filimkeyga duubista filimka ...
Diyaar u ah in la raro dhammaan cabirradu way ...
Qaali istaag reseala ...
Bacda warqadda bariiska ah ee gusset side jumlada ah
Bacda gusset side waa nooc ka mid ah bacda wax lagu duubo ee rogrogmi kara oo isku laaban labada dhinac ee bacda caadiga ah ee dusha sare ee bacda, isla markaana ka dhigaysa furitaanka asalka ah ee asalka ahi inuu noqdo furitaan afargeesle ah, iyo sababta oo ah isku laabidda ka dib, dhinacyada bacda ayaa la mid ah tuyere caleemaha, laakiin way xiran yihiin. , Marka boorsada waxaa loogu magac daray boorsada xubinta, iyo waliba maxaa yeelay waxay u egtahay barkin marka la buuxiyo sheyga, sidaa darteed dadka qaar waxay ugu yeeraan bac barkimo
Shiinaha qeybiyaha bacda warqadda hoose
Waraaqda Kraft waxay ka samaysan tahay saxarka kraft, badanaa waa bunni khafiif ah, kareem ama midab cad. Waa mid jilicsan oo xoogan, wuxuu leeyahay iska caabin dillaac badan, wuxuu u adkeysan karaa kacsanaanta iyo cadaadiska weyn, waa shey wanaagsan oo lagu baakadeeyo. Intaas waxaa sii dheer, maxaa yeelay waraaqda kraft-ka ahi waa mid bey'adeed u roon oo dib loo cusboonaysiin karo, oo qurux badan, hadda waa sii kordheysaa oo waa la sii dallacayaa.
OEM istaag boorsada warqad qufulka leh leh daaqad
Waa bac baakad rogrogmi kara oo salka hoose ku leh qaab dhismeed taageero ah, waxay ku istaagi kartaa shelf-ka iyada oo aan wax taageero ah la siin, haddii bacda la furo iyo haddii kaleba. Salka hoose wuxuu leeyahay laab laab iyo labo geesood oo wax lagu shaabadeeyo, mid bidix iyo mid midig, wuuna iskiis isku taagi karaa ka dib marka salka la kala bixiyo.
Boorsada taagan waa mid ka mid ah foomamka baakadaha ee ugu caansan, oo leh muuqaal shelf oo heer sare ah. Intaa waxaa sii dheer, si loo daboolo baahiyaha macaamiisha shaqsiyeed, boorsooyinka istaaga ayaa sidoo kale ku dari kara waxyaabo naqshad shaqsiyeed ah, sida gacmo-qabsiga, tilmaamaha qaloocsan, jiinyeerrada dib loo soo celin karo, iwm, taas oo si weyn kor ugu qaadeysa rabitaanka macaamiisha inay iibsadaan.
Bacda waraaqda fidsan ee khaaska ah
Bacda fidsan, oo sidoo kale loogu magac daray seddex gees shaabadood, maxaa yeelay waxay xiratay sedexda dhinac, kaliyana waxay uga hartaa hal furitaan oo kaliya dadka isticmaala si ay alaabada u geliyaan. Bacda fidsan waa nooca ugu caansan uguna fudud ee boorsada. Cidhiidhiga hawada ee bacda baakadaha fidsan ayaa ugu fiican, waana nooca keliya ee loo isticmaali karo bacda faakiyuumka.